Ukuphathwa kwempahla ku Costa Azahar
UKUPHATHWA NOKULUNGISWA KU COSTA AZAHAR
Inkampani yethu inikeza insizakalo yokulawulwa kwempahla, ephokophela inhloso yokunakekela amakhaya akho nokugcina izindawo zakho zokuhlala ngezinkathi lapho ungazisebenzisi khona.
Inhloso yethu ukuphatha impahla yakho ngayinye ngokunakekela futhi uyilandele, ukuze ukwazi ukujabulela ukuthula kwengqondo ngesikhathi ungekho nokuthi lapho wena noma izivakashi zakho nithatha isinqumo sokujabulela izinsuku ezimbalwa emakhaya enu, zisesimweni esifanele. lapho ifika.
Ukuphefumula nokubheka iminyango namawindi.
Ukuhlolwa kwezinto zangaphakathi nangaphandle.
Nikeza ukufinyelela kubalimi ukuze bakwazi ukunakekela abatshali.
Ukuqinisekiswa nokulawulwa komonakalo ongaba khona kanye nokuphathwa nokulungiswa kwawo (isevisi ngokuya ngezabelomali).
Ukubhalwa kombiko kanye nesabelomali.
Ukugcinwa nokuhlanzwa. (isevisi ngehora)
Ukuqoqwa kwemeyili nokuthunyelwa lapho kufanele khona.
Ifilosofi yethu yomsebenzi isuselwe ekunikezeni insizakalo eyanele neyobungcweti, inhloso yethu enkulu ukuqinisekisa izimo ezifanele ukuze wena nezivakashi zakho nikwazi ukujabulela ichibi lenu.
Sineqembu eliqeqeshiwe elinolwazi lokulondolozwa kwengadi, ukutshala nokusika utshani, ukuthena izihlahla, ukufutha, njll.
Inkampani yethu yenza zonke izinhlobo zomsebenzi wamapayipi jikelele, ixazulula izingqinamba ezivelayo osukwini nosuku ngendlela esheshayo nephumelelayo. Silungisa futhi sifaka amapayipi asekhaya, asivali amapayipi, sinakekela umswakama, ompompi nezinto zangasese, ukufakwa nokulungiswa kwamapayipi, ukuthuthwa kwendle, ukukhanda kanye nokufakwa kwezifudumezi zegesi namathemosesa, ukutholwa kokuvuza, njll.
Ukugcinwa kukagesi kwemishini nosizo lukagesi ekhaya lakho. Iseluleko. Insiza ephelele, emfushane nethembekile, ehlala yenziwa ngabafaki abagunyaziwe.Senza ukufakwa kwasekhaya, senza nemisebenzi elula neqondile (njengepulagi nokulungisa ukhiye) konke ngendlela efanele.
Ukuhlanzwa kwazo zonke izindawo zekhaya leholide: amakamelo, izindlu zangasese, igumbi lokuphumula, ikhishi, amasimu, ifenisha, izinto zikagesi, izitsha, njll. Kwenziwa ithimba lethu lochwepheshe abaqeqeshwe ngokugcwele futhi abahlala begadiwe ekuhlanzeni nasekuhlanzeni. Sinikela ngakho konke kusuka ekuhlanzeni masonto onke, ekuhlanzeni okujulile nasekuhlanzeni entwasahlobo ngemishini ekhethekile, kusuka kushintsho lomqashi ukuya enkonzweni yokuhlanza.
Ngabe udinga ukwenza umsebenzi, ukuguqula impahla yakho? Lapho kulungiswa kulula ukuhlela umsebenzi. Sitshele ukuthi ubucabangani mayelana nokuvuselela ukuhlala kwakho futhi sizokwazi ukuzivumelanisa nezidingo zakho. Cela isabelomali sezinguquko, uzosithola mahhala, ngaphandle kwesibopho.